Sida loo Isticmaalayo App Store Windows
Sida loo Isticmaalo Dukaanka Microsoft Windows 8 iyo Later
Hel waxkasta oo aad u baahan tahay Windows Store App Windows 8 iyo Windows 10
Waxaa jira barnaamijyo mobile-ka ah oo loogu talagalay wax walba oo aad ka fekereyso. Haddii aad rabto hab cusub oo loo soo diro Tweets ama qalab casri ah oo loogu talagalay barkinta xayiraadda, waa inaadan dhibaato ka qabin helitaanka wax aad ku isticmaali karto casrigaaga ama kombiyuutarka gacanta.
Iyadoo Microsoft, Android, iyo Apple ay soo bandhigeen barnaamijyadan muddo dheer, cidna weligeed ma keenin kombiyuutarkaaga desktop -ka ugu yaraan, ilaa Windows 8. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo bandhigo Diiwaanka Microsoft - sidoo kale loo yaqaanno Windows Store - muuqaal ah Windows 8 iyo Windows 10 oo kuu ogolaanaya inaad ka xulato kumanaan barnaamijyo la heli karo si aad u isticmaasho mid ka mid ah aaladaha cusub ee Windows.
Sida loo furo Dukaanka Windows
Si aad u bilawdo Dukumintiyada Windows, riix ama ku cadaadi Bilow oo dooro mashiinka Muuqaalka Microsoft . Foostadaada ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay midka lagu muujiyay sawirka kor ku xusan. Sawirka lagu muujiyay foornada wuxuu u wareegayaa si isku mid ah in sawirada sawiradu ay wareegsanayaan sawirada ku yaala Faylka Sawiradaada.
Dukaanka ayaa ka faa'iideysanaya interface-ka isticmaalaha ee lagu soo bandhigay Windows 8 , markaa waxaad ogaan doontaa in la dhigo naqshad farsameed muuqata oo caddaynaya waxa barnaamijyada, cayaaraha, filimada, iwm.
Dukaanka Windows waxaa sidoo kale laga heli karaa shabakadda, haddii aad doorbidayso inaad sidaan u hesho. Si fudud u tilmaam bogaagaaga: https://www.microsoft.com/en-us/store/
Fiiro gaar ah: Inkastoo aan muuqaalka sawirka lagu muujin, waxaad u rogi kartaa bogga bogga ee Windows Store si aad u aragto qaybo dheeraad ah ee barnaamijyada la heli karo.
Raadi Dukumintiyada Windows
Sawir-baadhis, Microsoft Store.
Waxaad ka heli kartaa agagaarka Dukaanka adiga oo ku dhajinaya shaashaddaada taabashada, gawaarida muraayadaada, ama gujinta iyo jiidista bararka barafka hoose ee daaqada. Ku dhaji hareeraha iyo waxaad ka heli doontaa barnaamijyada Macaamiisha waxaa loo dhigaa macquul ahaan qaybaha. Qaar ka mid ah qaybaha aad arki karto waxaa ka mid ah:
Cayaartoyda - Waxay ku jiraan munaasabado isboorti oo ay ka mid yihiin Angry Birds, Fruit Ninja iyo Jetpack Joyride.
Bulshada - Waxay ka kooban tahay barnaamijyo kugula xiriiraya, sida Twitter iyo Skype.
Entertainment - Barnaamijyada wakhtiga ka baxa sida Netflix iyo Hulu Plus.
Sawir - Muuqaal sawiro iyo maareyn maareyn sida Instagram iyo Adobe Photoshop Elements.
Muusikada & Video - Barnaamijyada loogu talagalay dhageysiga iyo daawashada sida Jiliyaha Radle iyo Movie Maker Pro.
Kuwa kale - Waxaa jira qaybo badan oo badan oo leh waxyaabo badan oo la bixiyo.
Markaad ku dhex jirto qaybaha, waxaad arki doontaa in Muuqaalka Muujinaya muuqaalada barnaamijyada ka soo category kasta oo leh fargeeto waaweyn. Si aad u aragto dhammaan noocyada kale ee qaybta, riix qaybta category. Caadi ahaan barnaamijyada ayaa lagu xallin doonaa caansaankooda, si ay u bedelaan, dooro Muuji dhamaantood ku yaal dhinaca midig ee liiska qaybta. Waxaa lagaa qaadayaa bog oo ku taxan dhammaan barnaamijyadan ku jira qaybtaas, waxaadna dooran kartaa shuruudaha kala soocista liisaska hoos ku qoran ee bogga bogga.
Haddii aadan xiiseyneynin inaad aragto wax kasta oo ay tahay in ay bixiso oo ay doorbidi laheyd oo kaliya in aad eegto barnaamijyada kuwa ugu caansan ama cusub, Mashruuca wuxuu bixiyaa aragtiyo gaar ah oo la heli karo sida aad u kala soocaysid aragtida qaybta wayn:
Lacagta ugu sareysa - Liisaska barnaamijyada ugu caansan category ee kharashka ku baxa
Bilaashka ugu sareeya - Ku qor barnaamijyada ugu caansan ee bilaashka ah ee qaybta
Daabacaad cusub - wuxuu taxaa barnaamijyada cusub ee qaybta aad dooratay
Xiritaanka - Waxay taxeysaa barnaamijyada iibinta ugu wanaagsan ee qaybta, haddii bilaash ama lacag la siiyo.
Celceliskii ugu sarreeyay - Waxay liis-saartaa barnaamijyada ku jira qaybtaas oo haysta darajooyinka xiddigaha ugu fiican, sida dib-u-eegista dadka isticmaala app.
Uruurinta - Liisaska ururinta barnaamijyada la xidhiidha ee ku saleysan bogga qaybta aad aragtay.
Browsing waa madadaalo oo waa hab weyn oo lagu heli karo barnaamijyo cusub si aad u tijaabisid, laakiin haddii aad haysatid wax gaar ah maskaxda, waxaa jira hab siyaabo ah oo aad ku heli karto waxa aad rabto. Waxaad ku qortaa magaca appka aad rabto sanduuqa raadinta ee bogga weyn ee dukaanka. Sidaad uhesho, sanduuqa raadinta ayaa si toos ah u soo jeedin doona barnaamijyo ku habboon erayada aad ku qorayso. Haddii aad aragto waxa aad raadinayso soo jeedimaha, waxaad dooran kartaa. Haddii kale, markaad wax qoreyso, riix Ku qor ama gali muraayada weyn ee bogga raadinta si aad u aragto natiijooyinkaaga ugu muhiimsan.
Ku rakib App
Isticmaalka fasaxa Microsoft. Robert Kingsley
Helitaanka app aad jeceshahay? Guji ama kudhig foornada si aad u aragto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan. Waxaad haysataa dusha sare ee bogga macluumaadka app si aad u aragto sharaxaadda , eeg Sawirada iyo Raadiyaha , iyo si aad u aragto waxa dadka kale oo soo dejiyey app sidoo kale jeclaa. Qeybta hoose ee bogga waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxa cusub ee ku jira noocan ah , iyo sidoo kale Nidaamka Shuruudaha , Noocyada , iyo macluumaad dheeraad ah .
Haddii aad jeceshahay waxa aad aragto, riix ama guji Gaar si aad u soo dejiso app. Marka rakibidda dhamaystiranto, Windows 8 iyo Windows 10 labadaba waxay ku dari doonaan appka shaashadaada bilowga .
Hayso barnaamijkaaga ilaa taariikhda
Markaad bilowdo isticmaalka barnaamijyada Windows, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in aad cusbooneysiiso waqtigan cusub si loo xaqiijiyo inaad hesho qaabka ugu wanaagsan iyo qaababka cusub. Dukaanka ayaa si toos ah u hubin doona cusbooneysiinta barnaamijyada aad ku rakibtay oo aadna ka digtoonaato haddii uu helo. Haddii aad aragto nambar mulkiilaha dukaanka ah, waxaa loola jeedaa inaad heshay cusbooneysiin si aad u soo dejiso.
Ku soo daji dukaanka oo guji sadexda dhibcood ee geeska midigta sare ee shaashadda.
In menu ee soo baxa, dooro Downloads iyo updates . Downloads iyo screen updates ayaa taxaya dhammaan barnaamijyada aad rakibtay iyo taariikhda ugu dambeysay ee la bedelay. Xaaladdan oo kale, wax laga bedelay micnaheedu waa cusbooneysiin ama la rakibay
Si aad u hubiso wixii cusbooneysiin ah, riix Hel updates oo ku yaal dhinaca midigta sare ee shaashadda. Dukaanka Windows wuxuu dib u eegayaa dhammaan barnaamijyadiinna iyo soo-ururinta wixii cusbooneysi ah ee la heli karo. Marka la soo dejiyo, cusbooneysiintaas ayaa si toos ah loo adeegsadaa.
Inkastoo qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadani loogu talagalay in lagu isticmaalo qalabka wax lagu duubo, waxaad ogaan doontaa shaqada ugu weyn ee jawiga desktop. Waqti yar qaado si aad u aragto waxa meesha ka baxsan, waxaa jira waxyaabo cajiib ah oo ah ciyaaraha iyo yutiilitiyada, kuwaas oo intooda badan aan kugu kici doonin wax.
Ma jiri karto barnaamijyo badan oo ku saabsan Windows 8 iyo Windows 10 maadaama ay jiraan Android ama Apple, laakiin waxaa jira boqolaal kun oo la heli karo hadda (669,000 sannadka 2017, sida ay Statista tahay) iyo in badan oo lagu daro maalin kasta.
Sidee loo saxeexaa 'PXE-E61: Ciladda Isku-imaatinka Warbaahinta, Hubi Qalabka Kabka'
Cortana: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku-xigeenka ku-meel-gaadhka ah ee Microsoft
Sida loo Aqoonsado Kumbuyuutarkaaga
Shan Soodhexe oo Fudud oo loogu talagalay Dhibaatooyinka Kumbuyuutarka badankooda
Windows Updates iyo Patch Tuesday Talaado
Windows 8 / 8.1 Qoraalada Naqshadeynta
Dib-u-soo-celinta dib-u-soo-noqoshada: Waa maxay Farqiga?
5 Barnaamijyadani waa Barnaamijka Ugu Danbeyn ee Podcasting
Sida Loo Beddelo Furaha Caddaanka ah ee Mashiinka Nidaamka
Dusha Akhriska E-Booker ee Android
Codsashada Xuddunta qayb ka mid ah Dukumentigaaga Ereyga
Noocee Nooca Isgaadhsiinta Weyn ee Better - Ethernet ama USB?
BRAVIA Sony Televisions - 240hz, 120hz, ama 60hz?
Waa maxay iPad Button Home? Maxay Sameyn Kartaa?
Sida loo abuuro fariin Cusub Isticmaalka Koodhadhka
Sida Loo Beddelo Email Password Mozilla Thunderbird
Sidee loo wadaagaa Windows 7 Files OS X 10.6 (Snow Leopard)
Ku tiirsanaanta waxqabadka ee Database
Sida loo abuuro loona isticmaalo iPhone X Miisaaniyada
Sida loo Siibo Loo Jabsado Liiska Playlist ee iTunes
Ragga Kubadda Koleyga ee NCAA, Madness March, iyo Afarta Dambe ee Raadiyaha
Isbarbardhiga u dhexeeya bixiyeyaasha Satellite ee DirecTV iyo DISH Network
Barnaamijyada DVD-duubista Barnaamijka
Maxay tahay IRQ (Codsi Joogsi)?
Baaritaanka Raadinta Sharciyeyaasha Sharciyada, Meelaha, iyo Bulshada